စျေးကွက်ရှာဖွေထိုးဖေါက်တာနဲ့ စျေးရောင်းတာဟာ ခွဲခြားလို့ မရတဲ့ အတွဲပါ..။ ဒါကို Marketing and Sales လို့ ပြောပါတယ်..။ တချို့ ကလည်း ပြောင်းပြန်ခေါ်ကြပါတယ်..။ ဘယ်လိုပဲ ခေါ်ခေါ် အခုအချိန်မှာ အရေးမကြီးတော့ပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် တကယ့် အမှန်ကို တော့ သိထားဖို့လိုပါတယ်..။ စျေးကွက် ရှာသမားက ရှေ့က လမ်းဖေါက်လမ်းထွင်ပြီး ကိုယ့်ကုန်စည်သစ်ကို မိတ်ဆက်ရပါတယ်..။ အလွန် မျက်နှာပူရတဲ့ အလုပ်ပါ.။ ဝါသနာ ပါပါတယ် ဆိုသူတွေတောင် တခါတလေ မျက်ရည်ကျရတဲ့ အလုပ်မျိုးပါ..။ သိပ်ကို အလိုက်သိရတဲ့ အလုပ်မျိုးပါ..။ သေသေချာချာ စူးစူးစိုက်စိုက် လေ့လာ လေ့ကျင့်ထားသူများသာ အောင်မြင်နိုင်တဲ့ အလုပ်ပါ..။ ဒီနေ့ခေတ်ဟာ ကုန်စည်သစ်တွေ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့ ခေတ်ပါ.။ အဲဒီ ကုန်စည်သစ်တွေကို အပြိုင်အဆိုင် ရောင်းဖို့ ကြိုးစားရတာပါ..။ အဲဒီအချိန်မှာ မားကက်တင်း ရဲ့ ကဏ္ဍ သိပ်ကို အရေးပါလာပါပြီ..။ မားကက်တင်းသမားက ထိုးဖောက် မွှေနှောက်ပြီး မိတ်ဆက် ဆွဲဆောင်နိုင်မှသာ အရောင်းသမားက ရောင်းရတာ အဆင်ပြေမှာပါ..။ မားကက်တင်းက စျေးကွက်ကို ထိုးဖေါက် ကြော်ငြာ ထားခဲ့ပြီ ဆိုရင် အရောင်းက နောက်က နိုင်နင်းအောင် ရောင်းပေတော့ ပဲ..။ မားကက်တင်းက ထိုးဖေါက်နိုင်စွမ်းအားနည်းရင် အရောင်းမသွက်တော့ပါဘူး..။
မားကက်တင်း သမားတို့ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေ စည်းကမ်းတွေ ရှိပါတယ်..။ အဲဒီကျင့်ဝတ် တွေ စည်းကမ်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေက သင်ပေးဖို့ လိုပါတယ်.။ မသင်ပေးပဲ တတ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားရင် မှားပါတယ်..။ သင်ပေးရမှာပါ..။ အလွယ်တကူ သင်ပေးလို့ ရတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို အတွေ့အကြုံ ကနေတဆင့်ပြောပြပါ့မယ်..။
ဒီနေ့ဟာ ဆက်သွယ်ရေး အလွန် ကောင်းတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်..။ ဘာကိုပဲသိချင်သိချင် တယ်လီဖုန်း တကြိမ်လောက် ဆက်လိုက်တာနဲ့ သိနိုင်တဲ့ ခေတ်ပါ.။ ကိုယ်ဘယ်သူနဲ့ ဆက်သွယ်နေတာလဲ ဆိုတာလေး သိရင် အလုပ်ဖြစ်ပါပြီ..။
ကိုယ့်အလုပ်က မားကက်တင်း … တွေ့ချင်တာက ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်..။ ဟုတ်ပါပြီ.. တနည်းနည်းနဲ့ တွေ့ချင်တဲ့ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် ရဲ့ ဖုံးနံပါတ်ရပါပြီတဲ့..။ ဘာလုပ်ရမတုန်း..။ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ရမတုန်း .. ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ရမတုန်း..။ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် ဘယ်လိုပေးရမတုန်း..။ ဒါက အရေးကြီးပါတယ်..။ ကိုယ်ရောင်းချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို ရောင်းထွက်ဖို့အတွက် တဖက်က ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့ တွေ့မှ ဖြစ်မှာလား..။ သူ့ဆီမှာ အဝယ်ဌာနတို့ ရွေးချယ်ရေး ဌာနတို့ မရှိဘူးလား..။ အဲဒီဌာနတွေကို ကျော်ပြီး ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး စျေးရောင်းမှာလား..။ သိပ်ကိုစဉ်းစားရမယ့် အချက်ပါ..။ အဲဒီလို ရွာကျော်ခဲပစ်လုပ်တာကို ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေက မကြိုက်ပါဘူး..။ သူ့ရဲ့ ကုမ္ပဏီက အဝယ်ဌာနကလဲ ကြိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး..။ ကိုယ်ရောင်းချင်တဲ့ ပစ္စည်း/ ဝန်ဆောင်မှု ကို အမှန်တကယ် ဝယ်ယူသုံးစွဲမယ့်သူကို တွေ့ပြီး ပြောပြရင်မကောင်းဘူးလား..။
ပြီးတော့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ကို ဖုန်းဆက်မှ ဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့အခါကျရင်လဲ.. ဘယ်လို ခေါ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ Salutation က သိပ်အရေးကြီးပါတယ်..။ ဦး xxxx .. ဒေါ်xxx ပါလား လို့ တိုက်ရိုက်မေးတဲ့ အလုပ်ကို ဒီနေ့ မားကက်တင်းတွေ သေသေချာချာ လုပ်ကြပါတယ်..။ အဲဒါ မှန်ကန်တဲ့ ချဉ်းကပ်နည်း မဟုတ်ပါဘူး..။ အဲဒီ… ဦး xxx ဒေါ်xxx ရဲ့ ဖုန်းကို ဆက်လိုက်လို့ တဖက်က ပြန်ထူးတာနဲ့ နာမည်ကို ဦးတွေ ဒေါ်တွေ တပ်ပြီး ခေါ်ပစ်လိုက်တာဟာ သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး..။ ကိုယ်မခေါ်ခင် အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ် ကို တနည်းနည်းနဲ့ သိအောင် ကြိုးစားထားရပါမယ်..။ ဘယ်အသက်အရွယ် ရှိပြီလဲ..။ သူ့ရဲ့ပညာအရည်အချင်း ကဘာလဲ..။ သူ့ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေက ဘာလဲ..။ သူ့ကို ဘယ်အချိန်မှာ စကားပြောရင် အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်မလဲ .. အခုကိုယ်ခေါ်တဲ့ အချိန်မှာ သူ စကားပြောချင်တဲ့ အချိန်မှ ဟုတ်ရဲ့လား..။ အနားယူနေသလား.. စသဖြင့် အများကြီး ကြိုတွေးထားဖို့ လိုပါတယ်..။
သင့်တော်တဲ့ အချိန်ဟုတ်ပြီ ဆိုရင်တောင်မှ ကိုယ့်ဖက်က စကားသံကို အတတ်နိုင်ဆုံး အချို ဆုံး ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပြီးမှ ခေါ်သင့်ပါတယ်..။ ဦးဦး.. ဒေါ်ဒေါ် .. ကိိုကို.. မမ.. လေးလေး.. ကြီးကြီး.။ ဆရာ.. ဆရာမ.. ဒေါက်တာ.. ပရော်ဖက်ဆာ..။ ဆရာကြီး .. ဆရာမကြီး..။ အန်တီ.. အန်ကယ်.. ဘဘ စသည်ဖြင့် ဂါရဝ တရားကို ရှေ့ထားတဲ့ နာမ်စားတွေ ကို ချိုချိုသာသာ သုံးသင့်ပါတယ်..။ ကိုယ့်လေသံက ပေါ့ရွှတ်ရွှတ် ပြောင်ချော်ချော် လေသံမျိုး မဖြစ်ဖို့ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်..။ သိပ်လေးစားစရာ မလိုပေမယ့် အသိအမှတ်ပြု ဖို့တော့ လိုပါတယ်..။ ကိုယ့်ကိစ္စ အောင်မြင်ရေးမှာ သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က အရေးပါတဲ့ အတွက် အရေးပါသူတစ်ယောက်ကို ဆက်ဆံတဲ့ ဆက်ဆံပုံမျိုး ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်.။ ထိချင်ရာထိ ဆိုပြီး ရမ်းသန်း ပစ်လိုက်တဲ့ မြားတစ်စင်း မဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်..။
တချို့ မားကက်တင်းတွေက သူတို့ရဲ့ တယ်လီဖုန်းထဲမှာ ဖုံးနံပါတ်တွေ အများကြီး မှတ်ထားပြီး ခေါ်တဲ့ အခါမှာ အထက်အောက် လွဲပြီး ခေါ်တာတွေ ရှိပါတယ်..။ နံပါတ်လွဲတာ သိပ်ပြသနာ မရှိပါဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ..။ ကိုယ့်နံပါတ်ကို ခေါ်ပြီး တခြားလူရဲ့ နာမည်ကို မေးတာ ကို သိပ်စိတ်ဆိုးတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သတိထားပါ..။
နောက်ထပ်သတိထားရမယ့် အချက်တချက်ကိုပြောပါမယ်..။ ၀၉ နဲ့စတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုံး နံပါတ်ကို ခေါ်တယ်.. ပြီးတော့မှ အဲဒီနံပါတ်ပိုင်ရှင် မဟုတ်တဲ့ နောက်တစ်ယောက် ကိုမေးတယ်..။ အဲဒါဟာ အလွန် ရိုင်းပါတယ်..။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်ဖုံးတွေပါ..။ အများသုံး ဖုံး မဟုတ်သလို တအိမ်လုံးသုံးတဲ့ အိမ်သုံးဖုံးလဲ မဟုတ်ပါဘူး..။ ဒါကြောင့် ၀၉ တွေကို ခေါ်တော့မယ် ဆိုရင် မခေါ်ခင် သေချာအောင် ပြည့်စုံအောင် လေ့လာထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ..။
တရက်က သင်တန်းမျိုးစုံဖွင့်တဲ့ သင်တန်းကျောင်းက ဝန်ထမ်းမိန်းကလေးက ဟိုတယ်လုပ်ငန်း တခုကို အကြံပေးနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆီ ကို ဖုံးဆက်တယ်..။ ပထမဆုံး အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ နာမည်ကို မေးတယ်..။ ဟုတ်ပါတယ် ဆိုတော့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ဒေါ်XXXX နဲ့ ပြောချင်လို့ပါလို့ ပြောတယ်..။ ဘယ်လောက်များ အသုံးမကျလိုက်သလဲ ဆိုတာ..။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဒီနံပါတ်ပိုင်ရှင်နဲ့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ဟာ အမြဲတန်း အတူတူ ရှိနေတယ်လို့များ ထင်လေသလား မသိ..။ နောက်ဆုံးသူရသွားတဲ့ အဖြေကတော့ အငေါက်ခံရခြင်းပါပဲ..။ ဒါလဲ အမှတ်မရှိဘူး..။ နောက်တခါ ထပ်ဆက်တယ် .. အဲဒီ ဖုံး ပိုင်ရှင်ရဲ့ နာမည်ကိုပဲမေးတယ်..။ အဲဒီအချိန်မှာ အဲဒီဖုံးပိုင်ရှင် က စိတ်ထဲမှာ တင်းနေပြီဆိုတာကို သူမသိဘူး..။ ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ လာတွေ့ပါရစေ လို့ appointment တောင်းတယ်..။ ဖုံးပိုင်ရှင်က ဘာလုပ်ဖို့တွေ့ချင်တာလဲ ဆိုတော့ လူကြီးမင်း ကြီးကြပ်အကြံပေးနေတဲ့ ဟိုတယ်ကို သင်တန်းပေးချင်လို့ပါ တဲ့ ..။ အဲဒီအကြောင်းကို ရှင်းပြချင်လို့ပါ ဆိုတော့ .. ပြီးသွားပြီပေါ့..။ မင်းလုပ်ငန်းအကြောင်းဘယ်လောက်သိသလဲ ဆိုတော့လဲ မဖြေနိုင်။ Consultant ဆိုတဲ့လူရဲ့ အရည်အချင်း .. Consultant ဆိုတဲ့ Role ဟာ ဘာမှန်းမသိတာ သေချာသွားပြီ..။ ဒါနဲ့ပဲ.. မင်းတို့ကုမ္ပဏီမှာ လူကြီးမရှိဘူးလား..။ လူကြီးချင်းပဲ ပြောမယ်.။ လုပ်ငန်းအကြောင်းဘာမှမသိတဲ့ သူတွေနဲ့ မပြောချင်ဘူး ဆိုလိုက်တော့ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဆိုပြီး ဖုံးချသွားတယ်..။ နောက်ထပ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်နေတော့ ထပ်ခေါ်ပြန်တယ်..။ ပြီးတော့မှ အခုနက စကားမှားသွား တာ တောင်းပန်ချင်လို့ပါလို့ပြောတယ်..။ အဲဒါလဲ နည်းလမ်းမကျဘူး..။ စိတ်ဆိုးအောင် နှစ်ခါလောက် လုပ်ပြီးမှ တောင်း ပန်ချင်လို့ ပါဆိုတော့ မခက်ပေဘူးလား..။ သူတို့အဖို့က တယ်လီဖုံး တစ်ခါလောက် ဆက်လိုက်ရင် အစစအရာ ရာ ပြေလည် သွားလိမ့်မယ် လို့ ထင်နေတာဟာ ဆိုးတာပါပဲ..။
သူများအဖွဲ့အစည်းကို အခကြေးငွေယူပြီး သင်တန်းပေးချင်လို့ပါ ဆိုတဲ့ တတ်..သိ..နားလည် အဖွဲ့အစည်းဟာ သူ့ ဝန်ထမ်းကိုတော့ သူသင်ပေးထားပုံမရဘူး..။ ကိုယ်လစာပေးထားတဲ့ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းကို တောင် ကိုယ်ကောင်းကောင်း လေ့ကျင့်ပေးမထားနိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း က တခြား အဖွဲ့အစည်းတခုကို သင်တန်းပေးမယ် ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးချဉ်းကပ်မှု First Impression က မှားသွားပြီ..။ တဖက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ယုံကြည်မှုကို သူရအောင် မယူနိုင်တော့ဘူး..။ ဒါမျိုး တွေ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ..။ ကိုယ်သေသေချာချာ လေ့ကျင့်ပေးမထားတဲ့ ငယ်သားတွေကြောင့် သူတို့ အဖွဲ့အစည်းမှာ အခွင့်အလမ်းတွေ ဘယ်လောက်ဆုံးရှံုး လက်လွှတ်ခဲ့ရပြီလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်..။
ကိုယ့်ဖေါက်သည် စိတ်ပျက်စေတဲ့ နောက်တမျိုးရှိပါသေးတယ်..။ စားသောက်ဆိုင်မှာ မိတ်ဆွေနှစ်ယောက် လုပ်ငန်းကိစ္စဆွေးနွေးကြဖို့ သွားပါတယ်..။ လေအေးစက် တပ်ထားတဲ့ အခန်းယူပါတယ်..။ စားပွဲထိုးရောက်လာပြီး အစားအသောက်စာရင်းတွေ ပြပါတယ်..။ အဲဒီအဆင့်အထိ အချောပါပဲ..။ စားသုံုးသူက ထမင်းကြော် မှာပါတယ်..။ သူမှာတဲ့ ထမင်းကြော်က အသား ငါး မထည့်ပဲ ကြက်ဥနဲ့ ကြော်ပေးဖို့ ပြောပြီး ကြက်ဥတစ်လုံးကို အကျက်ပြုတ်.. နှစ်ခြမ်းခြမ်းပြီး အပေါ်က တင်ပေးပါ လို့ မှာပါတယ်..။ စားပွဲထိုးက သေသေချာချာ ရေးမှတ်ပြီး ထွက်သွားပါတယ်..။ ခဏနေတော့ ပြန်လာပါတယ်..။ ကြက်ဥပြုတ် မရပါဘူး..တဲ့။ အံ့ကို သြ ရော..။ ကြက်ဥကြော်ရလား ဆိုတော့ ရတယ် တဲ့ .. ကြက်ဥကို ဆီနဲ့ကြော်တာတော့ရပြီး .. ရေနဲ့ ပြုတ်တာ ကျတော့ မရဘူးတဲ့..။ ဘာကြောင့်မရတာလဲ ဆိုတော့ ကြာမယ်လို့ စားဖိုမှူး ကပြောတယ်တဲ့..။ အံ့သြပါရဲ့ စားဖိုမှူးရယ်..။ အဲဒီ စားသုံးသူဟာ နောက်ကို အဲဒီဆိုင်အပါအဝင် သူနဲ့ နာမည်တူတဲ့ Chain Restaurant တွေကိုပါ မသွားတော့ဘူး ဆိုတာ အဲဒီ စားဖိုမှူး မသိလိုက်သလို လုပ်ငန်းရှင်လဲ သိလိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး..။ ထမင်းကြော်မှာစားရင်း လုပ်ငန်းကိစ္စ စကားပြောကြမယ့် စားသုံးသူနှစ်ယောက် ဟာ ကြက်ဥတစ်လုံးပြုတ်ရင် ကြာမယ့် ၅မိနစ်ကို မစောင့်နိုင်ဘူးလို့ အဲဒီစားဖိုမှူး ထင်ပုံရပါတယ်..။ အဲဒီ စားဖိုမှူး မသိလိုက်တဲ့ နောက်ထပ် အချက်တချက်က အဲဒီ ကြက်ဥပြုတ်မှာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဟိုတယ် လုပ်ငန်း နယ်ပယ်မှာ နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်လောက် ကျင်လည်ခဲ့ ပြီး ဟိုတယ် လုပ်ငန်း ပညာသင်ကြားပို့ချ ပေးနေသူ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ..။
နောက်တနေရာမှာတော့ အရောင်းသမားရဲ့ မပါးနပ်ပုံလေးပါ..။ စားသောက်ဆိုင်တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ .. စာရင်းစာရွက် လာချ မှာလိုက်တော့ ကောင်းပြီကောင်းရဲ့ ဆိုပြီး မီးဖိုထဲဝင်သွား..။ တော်တော်ကြာတော့ ပြန်ထွက်လာ..။ အဲဒါမရဘူးခင်ဗျ..။ ဒီစာရင်းထဲက နောက်ထပ်ပြောင်းမှာပါဦး ဆိုတာမျိုး ..။ ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း ကိုယ်မလေ့လာထားတာ..။ စားသုံးသူကို သိပ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်..။ ထမင်စားပြီး တော့ ထောပတ်သီးဖျော်ရည်ရလား ဆိုတော့ ရတယ်. မစ်ရှိတ်လား လက်ဖျော်လား..။ အေး.. လက်ဖျော်ပေးပါကွာ..။ ပြီးတော့မှ မရတော့ဘူး ကုန်သွားပြီ .. စတော်ဘယ်ရီလက်ဖျော်တော့ ရတယ် ယူမလား..။ တော်ပါပြီကွာ မမှာတော့ပါဘူး..။ အဲဒါကတော့ ဆိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် မှားတဲ့ အမှား..။ သူပဲ ရတယ် ပြောတယ်.. ပြီးတော့ သူပဲ မရဘူး.. ကုန်ပြီလို့ ပြောတယ်.။ ပိုက်ဆံကလဲ လိုချင်သေးတော့ နောက်တမျိုး ပြောင်းမှာပါလား ဆိုပြီး အကြံပေးတယ်..။ ကောင်းလိုက်တဲ့ အကြံ .. တကယ်လို့သာ အစကတည်းက အဲဒီအကြံမျိုးကို ပူးတွဲပြီး ပေးခဲ့ရင် ဒုတိယရွေးချယ်မှု အဖြစ် စဉ်းစားမိမှာပါ..။ ဒါပေမယ့် ငါးမရမှ ရေချိုး သွားပါဦး လို့တော့ မလုပ်နဲ့လေ..။
နောက်တမျိုးကလည်း အဲဒီလို ပဲ ကိုယ့်ကုန်စည်ရဲ့ ဗဟုသုတ ကို လေ့လာမထားတာ..။ ဥရောပ အစားအစာ တွေထဲမှာ မြန်မာ့ပါးစပ်နဲ့ လိုက်ဖက်တာက “စပါဂတီ” ဆိုတဲ့ အီတာလျံခေါက်ဆွဲ..။ သူ့မှာ သူ့ကိုယ်ပိုင်အခေါ်အဝေါ်တွေရှိတယ်..။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို မူရင်းအတိုင်း သင်မပေးကြပဲ..မြန်မာ အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ ပူးတွဲ ပြီး မြန်မာမှုပြုလိုက်ကြတယ်..။ “စပါဂတီ ဘိုလိုညေး” ဆိုရင် စာလုံးပေါင်းတော့ “ဘိုလိုနီးစ်” လို့ ရေးတယ်.. အသံထွက်တော့ “ဘိုလိုညေး” လို့ထွက်တယ်..။ “ဘိုလော့ဂနာ” ဆိုတဲ့ ဘောလုံးသင်းလိုပဲ..။ ဘောလုံးသင်းရဲ့ အသံထွက် အမှန်က “ဘိုလိုညာ” ဒါပေမယ့် စာလုံးပေါင်းအတိုင်း အသံထွက်လိုက်တော့ “ဘိုလော့ဂနာ” ဖြစ်ကရော အဲဒီလိုပဲ “ဘိုလိုညေး”ကို “ဘိုလိုနီးစ်”လို့ ထွက်လေ့ရှိကြတယ်..။ အဲဒါက အမဲသားဆော့စ် နဲ့ စားရတာ.. “အမဲသား ဆော့စ်နဲ့ ပြုလုပ်သောစပါဂတီကို စပါဂတီဘိုလိုညေး ဟု ခေါ်သည်” လို့ သင်မထားပဲ.. “စပါဂတီ အမဲသား” လို့သင်ထားလိုက်တယ်..။ နားလည်တဲ့ စားသုံးသူက စပါဂတီ ဘိုလိုညေး စားမယ် လို့မှာရင် အမဲသားနဲ့လား လို့ ပြန်မေးတာက တော်တော် ခံရခက်စေတယ်..။ သူ့ထက်ပိုဆိုးတာက “စပါဂတီ နာပိုလီတာနာ” ..၊ အဲဒါက ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် နဲ့ လုပ်တာ ဘာအသားမှ မပါဘူး..။ အဲဒါကို “စပါဂတီ နာပိုလီတာနာ” လို့ မှာရင် ဘာသားနဲ့လဲ လို့ ပြန်မေးခံရတာ ပိုဆိုးတယ်..။ ဒါတွေက ကိုယ့်ဆီမှာ အားပေးတဲ့ စားသုံးသူကို အနုနည်းနဲ့ စော်ကားတာပါပဲ..။
သေသေချာချာ သင်ပေးမထားပဲ ဝန်ဆောင်မှုပြုစေတာဟာ အလုပ်ရှင်ရဲ့ အမှားပါ..။ သူတို့ မသိလိုက်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က စားသုံးသူ အတော်များများဟာ မသိမသာ ဆိုင်ပြောင်းပြီး အားပေး သွားကြတာဟာ ကိုယ့်ဆီက ဝန်ဆောင်မှု တွေ ညံ့နေလို့ ဆိုတာပါပဲ..။ ကိုယ့်ဆိုင်ကို လာနေကျ ကိုယ်နဲ့လဲ ခင်မင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဖေါက်သည်တယောက်ကို မတွေ့တာကြာပြီး အမှတ်မထင်ပြန်တွေ့တဲ့ အခါ “မတွေ့တာ ကြာပြီနော်” လို့ နှုတ်ဆက်ရပြီ ဆိုရင် ကိုယ်ရှုံး ပြီလို့သာ မှတ်ပါ..။ အဲဒါအပြင် နောက်ထပ် ဆုံးရှံုး တဲ့ ဆုံးရှံုးမှုကြီး တစ်ခုက အဲဒီလို ဆက်ဆံခံလိုက်ရတဲ့ ဖေါက်သည်ဟာ သူ့မိတ်ဆွေ အနည်းဆုံး ဆယ်ယောက်ကနေ အယောက် နှစ်ဆယ်ကို သူ့အတွေ့အကြံုကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်လိမ့်မယ် ဆိုတာပါပဲ..။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ပြိုင်ဖက် မရှိရင်တော့ ဘာအရေးလဲ..။ အပြိုင်အဆိုင်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှံုးမှု ကြီးပါပဲ..။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိလိုက်ပဲနဲ့ ဆုံးရှံုး သွားရတာပါ..။ ဒီလျှို့ဝှက်ချက် ကို သိပြီး ပိတ်ဆို့ ဖာထေး လိုက်နိုင်ရင်တော့ သူ့ရဲ့ ဆုံးရှံုး သွားတဲ့ ဖေါက်သည် တချို့ကို ပြန်ရနိုင်ပါသေးတယ်..။ ဒါပေမယ့်.. ကိုယ့်တိုင်းပြည်က လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ ဖေါက်သည်ကို အမှန်တကယ် အလေးထားကြရဲ့လား..။ “ ငကန်းသေရင် ငစွေလာလိမ့်” ဆိုတဲ့ တလွဲ ဆံပင် ကောင်းနေကြတုန်းပဲလား..။ ။
« အတွေ့အကြုံ ဟာ ရောင်းကုန်
သကြားမစားတော့သော ပုရွက်ဆိတ်များ »